जातपातको एसिडले जन्माएका जीवन | Direction Kathmandu
Home » Information » जातपातको एसिडले जन्माएका जीवन
जातपातको एसिडले जन्माएका जीवन
Posted on March 24, 2015 by DKTM
बसन्तपुर एसिड काण्डका अभियुक्त जीवनलाई सार्वजनिक गरेयताका तीन दिनदेखि पाको, न्युरोडमा सानो चियापसल चलाएर बसेको विश्वकर्मा परिवार विषादले घेरिएको छ।
जति ठूलो चोट परे पनि उनीहरू आइतबार आफ्नो पसलमा चिया पकाइरहेका भेटिए। तिनले चिया पकाइरहेको भन्नु मात्र हो, भित्रभित्रै आफैँ पाकिरहेका थिए। मन भने चिसो थियो।
‘एसिड हान्ने जीवन भन्ने मान्छे समातियो रे,’ चिया पसलमै काम गरिरहेका बेला उनीहरूले सुने। सहरमा यस्ता जीवन कति छन् कति? उनीहरूलाई आफ्नै भाइ र छोरो जीवनले यस्तो गर्‍यो होला भन्ने कहिल्यै लागेन।
दिनभरि चियापसलमा काम गरेपछि उनीहरूले राति मात्र टेलिभिजनमा जीवनलाई प्रहरीको पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सार्वजनिक गरिएको देखे। उनीहरूका आँखालाई विश्वास भएन। ‘त्यस्तो ज्ञानी छोरा कसरी त्यस्तो भयो, कसले त्यस्तो बनायो उसलाई?’
जीवनका ५२ वर्षीय पिता मानबहादुरले सेतोपाटीसँग भने, ‘मलाई तीन दिनदेखि भोक पनि लागेको छैन, निद्रा पनि लागेको छैन।’
एसएलसीको तयारीमा रहेका तीन छात्रामाथि एसिड प्रहार गरेको घटनाको अभियुक्तका रूपमा जीवनलाई सार्वजनिक गरिएयता उनीहरूको भविष्य पनि एसिडको दागजस्तै अँध्यारो भएको छ। जीवनले बसन्तपुरमा ट्युसन पढ्न गएकी संगीता पुलामीमगरमाथि एसिड छ्यापे। उनीसँगै रहेका अरु दुईजना सीमा बस्नेत र हिमु मुखर्जी पनि यसबाट घाइते भए।
घरपरिवार, छिमेक र नातागोता सबैतिर राम्रो मान्छे भनेर चिनिएका जीवन कसरी कलिला छात्रामाथि एसिड छ्याप्न पुगे? कसरी त्यस्तो अपराध गर्न पुगे?
जुन परिस्थितिले त्यो अपराधको गर्भधारण गरायो, त्यो हाम्रो सामाजिक चेतलाई हल्लाउने प्रकृतिको छ।
रामेछापबाट विश्वकर्मा परिवार १३ वर्षअघि राजधानी आएको हो।
उनीहरूका निम्ति काठमाडौँ एउटा सपनाको सहर थियो। मुक्तिको सहर थियो। गरिबीबाट छुटकारा पाइन्छ, छोराछोरी पढाउन सकिन्छ भन्ने मानबहादुर र नुनुमायालाई लागेको थियो।
राजधानीमा उनीहरू अर्को मुक्ति पनि चाहन्थे- गाउँमा भोगेको छुवाछुतको उत्पीडनबाट। त्यसैले यो परिवारले आफूलाई खड्का भनेर चिनाउन थाल्यो।
तीन छोरा र दुई छोरीसहित सात जनाको परिवार लिएर आएका मानबहादुरले ज्यामी काम गरेर परिवार पाल्न थाले। उनलाई साथ दिन्थिन् पत्नीले। सबैभन्दा जेठी सन्तान मञ्जुले पनि अरुको पसलमा काम गरेर परिवारलाई भरथेग गर्न सघाइन्।
जेनतेन जिन्दगी चल्न थाल्यो। परिवारको पेटमा माड पस्ने भयो। साना नानीहरू स्कुल जान थाले।
‘म त लाटो मान्छे हजुर,’ मानबहादुरले आफ्नो नाम पनि जेठी छोरी मञ्जुसँग सोधे, ‘के नागरिकताकै नाम भन्ने?
छोरीले ‘होइन’ भनिसक्दा नसक्दै यी सोझा मानबहादुरले फुस्काइहाले- ‘काले।’
तीन वर्षअघि यो परिवारले न्युरोड पाकोमा आफ्नै चिया दोकान खोल्यो। अनि न्युरोडनजिकै झोछेँमा डेरा लिएर बस्न थाल्यो। अर्काको कपडा पसलमा काम गरेर परिवार र भाइबहिनीलाई सहयोग गर्दै आएकी मञ्जु अब आफ्नै चियापसलमा काम गर्न थालिन्।
जीवन कलेज पढ्न थाले। सबैको आशाको किरण जीवनले सरकारी जागिर खाएपछि दुःखका दिन सकिने प्रतिक्षामा बाच्न थाल्यो विश्वकर्मा परिवार।
संयोग कस्तो पर्‍यो भने पुलामीमगर परिवार पनि त्यही घरमा बस्थ्यो। सुरुमा दुई परिवारबीच हिमचिम राम्रै थियो। जीवनको पढाइ राम्रो भएका कारण संगीता र उनका भाइ सन्तोष उनीसँग सिकाइमाग्न आउँथे। जीवनले प्रहरीसमक्ष दिएको बयानमा संगीता र जीवन एकअर्का प्रति आकर्षित भएको र त्यो आकर्षण बिस्तारै प्रेममा बदलिएको बताएका छन्। यसको पुष्टि संगीताबाट भएको छैन।
जीवनकै डेरामा संगीताले एकपटक उनको परिचयपत्र देखिन्, त्यसमा उनको थर बिक लेखिएको थियो।
प्रहरीका अनुसार सन्तोष जीवनसँग पैसा माग्थे, पैसा नदिए दिदीसँगको सम्बन्ध बा-आमालाई भनिदिन्छु भन्थे। जीवनले सधैँ पैसा दिन सक्ने कुरा थिएन। साँच्चै नै एकदिन सन्तोषले बा-आमासामु ‘राज’ खोलिदिए।
जीवन दलित भएको थाहा पाएपछि पुलामीमगर परिवार राँकियो। संगीता पनि परिवारतिरै लागिन्।
दुई परिवारबीच हिजोसम्मको सौहार्दता तुरुन्तै सत्रुतामा बदलियो। जीवनको परिवारले छुवाछुतबाट पाएको मुक्ति खोसियो। राजधानी पनि अब मुक्तिको सहर रहेन!
‘तँ यस्तो जात, उस्तो जात भन्न थाले,’ मञ्जुले भनिन्, ‘हाम्रो ढोकामा ड्यांग हान्न थाले। हामीलाई देख्नै नहुने मनपरी बोल्न थाले।’
एकदिन समस्या यति उत्कर्षमा पुग्यो, चोकमा जीवनमाथि आक्रमण भयो। उनको सर्ट च्यातियो। कराँते सिकेकी संगीताले स्वयंले बाबु मानबहादुरमाथि पनि प्रहार गरिन्।
‘एउटा पढे-लेखेको त्यस्तो मानिसलाई जातकै आधारमा चोकमा कुटपिट गरे,’ मञ्जुले उनीहरूलाई उद्धृत गर्दै भनिन्, ‘तँ सानो जातको मान्छे, आफ्नो ठाउँमा बस्।’
कुटपिटको उजुरी प्रहरीमा पनि पुग्यो। ‘भाइ र बुवालाई पिटेपछि मैले केही गर्न सकिनँ, जिउ थर्रर काम्यो,’ मञ्जुले भनिन्, ‘बहिनीले प्रहरीलाई खबर गरेपछि उनीहरूलाई समातेर जनसेवा प्रहरीमा लगे।’
प्रहरीले पुलामीमगर परिवारलाई एकदिन थुनामा राखेपछि फेरि मिलौं भन्ने प्रस्ताव आयो। ‘४०/५० जना मानिस आएका थिए,’ मञ्जु सम्झिन्छिन्, ‘मिलेर बसौं भनेका थिए। मिलेपछि फेरि हामीलाई छि:छि: गर्ने, चोकमा पानी भर्न नदिने गर्न थाले।’
मञ्जुका अनुसार पुलामीमगर परिवारले जातकै आधारमा आफू र बाबुमाथि कुटपिट गरेपछि जीवनभित्र बदलाको भावना आउन थाल्यो। कुटपिटपछि उसलाई डिप्रेसन हुन थाल्यो।
त्यो घटनाअघिसम्म जीवनमा जीवनप्रति प्रचुर उत्साह थियो।
कुपण्डोलको प्रगति शिक्षा सदनमा पढेका उनले एसएलसीमा ७०.७८ प्रतिशत ल्याएका थिए। सानैदेखि उनले अर्काको घरमा भाँडा माझेर पढेका थिए। ९ कक्षामा पुगेपछि मात्र उनी परिवारमा बस्न आए र आफ्नो शिक्षालाई निरन्तरता दिए।
परिवारलाई जीवनले जहिल्यै आशा देखाउँथे। दाइको बिहे गर्ने बेलामा पनि उनैले सबै व्यवहार मिलाएका थिए। ‘ऊ मेरो भाइ भए पनि दाइजस्तो थियो,’ जीवनका दाइ सचिनले भने, ‘मेरो बिहेका लागि उसैले सबै काम गर्‍यो।’.
जीवनलाई सरकारी सेवा गर्ने ठूलो रहर थियो। त्यही भएर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको असइको लिखित जाँच पनि दिएका छन्। दौड, अब्स्ट्याकल सबै पास भइसकेका उनी लिखितमा पनि पास हुन्छु भन्नेमा दृढ थिए।
‘भाइ लोकसेवा आयोग र नेपाली सेनासम्बन्धी ठुल्ठूला किताब पढिरहेको हुन्थ्यो,’ मञ्जुले भनिन्, ‘उसले एक जोर राम्रो चप्पल पनि लगाएन, राम्रो मोबाइल पनि थिएन। मैले जागिर खाएपछि तिमीहरू सबैलाई राम्रो गर्छु भन्थ्यो।’
दाइ बिहे भएर लाजिम्पाटमा बस्न थालिसकेका थिए। जीवनले दिदीलाई सधैं भन्ने गरेका थिए- पख, दिदी म जागिर खाएपछि तेरो बिहे गराइदिन्छु। मञ्जुले गहभरि आँसु पार्दै भनिन्, ‘परिवार राम्रो बनाउँछु भन्थ्यो। बालाई टिबी थियो, उसैले उपचार गरायो। आमाका खुट्टा मिचिदिन्थ्यो, हामीलाई टाउको दुख्दा उसैले सुम्सुम्याउथ्यो। बरु हामीलाई घिन लाग्थ्यो, तर उसैले बाको सेवा गर्थ्यो।’
टिभीमा आफ्नो भाइ देखेदेखि मञ्जुका सपनामा तुषारापात भएको छ। ‘मैले विष खानु पर्‍यो भन्ने पनि सोचेँ,’ उनले भनिन्, ‘फेरि बाआमाको बिजोग हुन्छ भनेर रोकिएँ।’ योबीच दुईपटक आत्महत्या गर्ने सोच बनाएकोसमेत मञ्जुले बताइन्।
दलित परिवारमै जन्मिएका कारण आफूमाथि छुवाछुत र उत्पीडन भएपछि जीवन डिप्रेसनको सिकार भए। उनले शिक्षण अस्पतालका चिकित्सकलाई समेत भेटे। पढाइमा ध्यान जान छाड्यो। उनले परिवार र टोल छाडे र टोखामा बस्न थाले।
उनीले देशै छोड्न पनि प्रयास गरे। भारतीय सेनामा जागिर लगाइदिन्छु भनी राजेश प्रधान नामका व्यक्तिले सिक्किम बोलाएर ५० हजार रुपैयाँ पनि ठगी गरेपछि उनलाई झनै चोट पर्‍यो।
गत वर्षदेखि टोखामा बस्न थालेका उनी दसैँ मान्न बुबाआमाकहाँ आएका थिए। तिहार मानेर फेरि उनी फर्के। विश्वकर्मा परिवारले जीवनलाई त्यसयता नभेटेको बतायो। उनीहरूलाई जीवन सिक्किमतिरै छ भन्ने थियो।
जीवनले परिवार छोडे, टोल छोडे, देशै छोड्ने सोच बनाए। तर, उनलाई झोँछेको आफ्नो डेरामा घटेको घटनाको घाउले छोडेन। त्यो घटनाप्रति प्रतिशोधको भावनाले उसलाई छोडेन।
दलित भनेर हेप्न थालेपछि सुरुमै डेरा सर्न पाएको भए त्यो घटना हुँदैनथ्यो भन्ने अहिले यो परिवारलाई लाग्न थालेको छ।
‘हामीले डेरा सर्न खोजेका थियौं,’ मञ्जुले भनिन्, ‘कोठा खोज्दा पाइएन। हामीलाई आफ्नै कामले फुर्सद पनि भएन। नबोली बसौं भनेका थियौं। तर, भाइलाई रातोदिनको हेपाइले यस्तो अवस्थामा पुर्‍याएछ।’
मञ्जुका अनुसार त्यही घरमा बस्दा मात्र जातपातको समस्या आएको हो। अन्यत्र त जातको त्यत्रो ठूलो समस्या थिएन। चिया पसल गरेका ठाउँमा पनि सबैले माया गर्छन्। ‘उसैले यसो गरायो भन्ने हामीलाई विश्वास हुँदैन,’ मञ्जुले भाइका बारेमा अगाडि भनिन्, ‘त्यो बिग्रेको मानिस होइन। मिहिनेती र बुद्धिमान मान्छे थियो। बूढापाकालाई समेत यसो गर्नू उसो गर्नू भनेर सम्झाउँथ्यो।’
जीवनले आफूलाई असह्य भएपछि बाध्य भएर यो बाटो लिनु परेको पनि प्रहरीलाई बताएका छन्। पहिले लट्ठीले मात्रै हान्ने सोचे पनि हात कामेको र पछि भारतीय टेलिभिजन हेरेर एसिड हान्ने तरिका सिकेकोसमेत उनले प्रहरीलाई बताएका छन्।
असईका निम्ति जाँच दिएका जीवनलाई प्रहरीहरूले सोधे- के तिमीले दौड, अब्स्ट्याकल पनि पास गरेका थियौं?
‘सर, म अरु मान्छेभन्दा कुन अर्थमा कम छु र?’ उनको जवाफ थियो, ‘खेलकुदमा राम्रो छु। राम्रो पढे-लेखेको छु। जातका आधारमा हेय दृष्टिले हेरेपछि मात्रै मैले बदला लिन यसो गरेको हुँ।’
उनले प्रहरीलाई दिएको बयानमा भनेका छन्, ‘मलाई पश्चाताप छैन, सर।’
उनलाई उद्धृत गर्दै अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरीले सेतोपाटीसँग भने, ‘मलाई पीडा दिनेलाई पीडा दिन पाएँ, यसैमा आनन्द लाग्छ।’
यति भन्दाभन्दै पनि उनले आफ्नो भविष्यप्रति निराश हुँदै एक प्रहरी अधिकृतलाई भने, ‘मेरो भविष्य अब यत्तिकै सकिने भयो, सर!’
तस्बिर : प्रकाश लामा